Ny ankizy amin'ny vanim-potoana samihafa dia mandany fotoana betsaka amin'ny lalao. Amin'ny vanin-taona mafana, sy amin'ny toetr'andro amin'ny lohataona mafana, ny ankizy dia te-hilalao eny an-dalambe, indrindra indrindra fa noho ny alahelohelo toy izany dia ahafahan'izy ireo mamoaka ny angovo voangona mandritra ny andro. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia omentsika ny sainao ny lalao an-dalam-pihariana mahaliana ho an'ny ankizy mba handaminana azy ireo eny an-kalamanjana, izay mety ho tian'ny ankizilahy sy ny ankizivavy amin'ny taona samy hafa.
Lalao an-dalamby ho an'ny ankizy any am-pianarana
Ho an'ireo ankizy tsy mandeha any an-tsekoly dia tsara kokoa ny lalao mavitrika amin'ny fikarakarana eny an-dalambe raha oharina amin'ny hafa:
"Ny baolina am-piravoravoana amam-boninahitra!". Ny zatovolahy rehetra dia mijoro anaty boribory, mihazona tanana, ary iray amin'izy ireo, izay nofidiana ho filoha, dia mipetraka eo afovoan 'io faribolana io. Ny andraikitry ny fitarihana dia ny manosika ny baolina ao amin'ny faribolana, ary ny mpilalao hafa rehetra - aza avela hanao izany. Mandritra izany fotoana izany ihany, ny baolina dia mety ho fongana ihany, voarara tanteraka ny hikasika azy amin'ny tanana amin'ny toetry ny lalao. Raha toa ka nahavita ny tanjona ilay mpandrindra, dia nandray ny toerany ilay mpilalao izay tsy nahomby ilay baolina, ary mitohy ny lalao.
"Burners." Ireo mpandray anjara rehetra ao amin'ny lalao dia mizara ho roa ary mijoro eo amin'ny tsanganana, ary ny mpanatrika dia mifanatrika, mifanatrika amin'izy ireo. Ny ankizy dia miteny ao anaty hira mihira ireto teny manaraka ireto:
Mitsangàna eo amin'ilay fonosina,
Jereo ny saha.
Mandeha trompetra izy ireo
Eny, mihinana kalachi.
Jereo ny lanitra:
Mirehitra ny kintana,
Cranes dia mihiaka hoe:
-Gu-gu, handositra aho,
Ary mihazakazaha toy ny afo! "
Rehefa avy niresaka an'io andininy io, nandray ny tanany ireo mpandray anjara tamin'ilay mpivady farany ary nihazakazaka haingana hatrany am-piandohan'ny tsanganana. Raha manao izany izy, dia manandrana mamono azy ny mpanolotra. Raha samy nahatratra ny tanjona ny mpilalao roa ary naka ny toeran'ilay mpivady voalohany tao amin'ny tsanganana, dia mitohy ny lalao. Raha afaka nanararaotra ny iray tamin'ireo lehilahy ireo mpandrindra dia nandray io toerana io ny mpandray anjara ary nanomboka indray ny lalao.
"Zana-peo i Salsky." Io karazam-pandaharana tsotra io dia malaza be eo anivon'ireo ankizy any am-pianarana. Ny maha-zava-dehibe azy dia midika fa ny mpitarika dia mihazakazaka amin'ny mpilalao mpilalao, izay manova tsy tapaka ny fomba fihetsika, raha toa kosa ilay mpamily no manao izany.
Lalao an-kalamanjana mandritra ny lohataona ho an'ny mpianatra
Ho an'ny mpianatra amin'ny sokajin-taona isan-taona, anisan'izany ny zatovo, ireto lalao an-kalamanjana manaraka ireto dia mety:
"Ravaka roa." Ao amin'ny tany miaraka amin'ny fanampiana ny tsora-kazo na tsangantsanganana santionany roa, ny diamondra iray iray dia mihoatra ny elanelan'ny iray hafa. Mifanakaiky ny faribolana. Ireo mpandray anjara ao amin'ilay lalao dia avela ho ao anaty paosy kely na ivelany, ivelan'ny lehibe. Ny asan'ny mpilalao tsirairay dia ny mijanona ao amin'ny faritra azo ekena, fa miaraka amin'izay koa ny manery ny hafa hanaraka ny faritra voafetra.
"Paintball Water." Ny mpandray anjara rehetra dia mizara ho ekipa 2, izay samy manana ny isan'ny mpilalao. Miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovam-pitaovam-pitaovam-bary, ekipa ekipa no hifaninana amin'ireo izay handevona ireo mpifanandrina.
"Merry Hunting". Amin'ny fiandohan'ity lalao ity, ireo mpandray anjara dia misafidy "lambo" - tanjona iray izay tsy maintsy ariana mandritra ny fihazana. Ny ekipa hafa dia mizara ho ekipa 2, izay samy mandray ny lokon'akanjo marobe amin'ny loko samihafa. Ny andraikitry ny "lambo" dia ny mandositra ny "mpihaza" ka tsy misy olona manenjika azy. Ny mpilalao hafa dia tokony hanangona ilay niharam-boina ary hifikitra amin'ny loko misy azy. Ny mpandresy no ekipa izay nahavita nanamboatra takelaka bebe kokoa.
"Mitsambikina eo amin'ny log." Voalohany, ny anjara asan'ny "log" dia iray amin'ireo mpandray anjara, izay mandainga fotsiny ary tsy mihetsika. Ny asan'ny mpilalao sisa dia ny hitsambikina haingana araka izay tratra amin'ny "log" amin'ny lalana isan-karazany, miezaka tsy hamela ny sisa amin'ireo lehilahy manao izany.
"Ento ny atody." Io lalao io dia atao amin'ny fitsipiky ny fifamoivoizana. Ny mpilalao rehetra dia mizara ho ekipa 2, ka ny tsirairay avy dia mandray ny taokantony ambony ary ny atody aok'izany. Ny kapitenin'ireo ekipa roa ireo dia manamboatra sotro iray eo am-bavany ary mametraka atody iray ao aminy, ary avy eo dia mandeha mankany amin'ny tanjona napetrak'izy ireo amin'ny halavirana 5 metatra farafahakeliny. Tsy azonao atao ny manohina ny fananana amin'ny tananao! Rehefa vitan'ilay kapiteny ny tanjony, dia nandalo ilay sotro tamin'ny mpilalao manaraka izy, izay lasa mitovy ny asany.
Sofabes ho an'ireo ankizy sy zatovo
Ahoana ny fomba hanaovana sakafo amin'ny plastika?
Ny toetra mampiavaka an'ilay zaza
Chastushki amin'ny 9 Mey ho an'ny ankizy
Fiarovana amin'ny afo ho an'ny ankizy
A dummy - ho avy sy manohitra?
Katedralina avy amin'i Maria Virjiny Masina (Bogor)
Feed for cat cats
Victoria Beckham dia mikasa ny hamorona akanjo fampakaram-bady ho an'i Pippa Middleton
Miary tsy misy menaka palmie
Ahoana no handraisana omeleta ao anaty oven mikrofo?
27 Printsy Disney izay mampahatsiahy anao ny antoko
Anastasia Shpagina tsy misy fanoratana
Jacket miaraka amin'ny fitaovam-peo